आस्था राउतको सिसिटिभी फुटेज बाहिर ल्याउने प्रहरीले, ३३ किलो सुन काण्डको फुटेज किन देखाएनन् खोइ?
काठमाडौं। आस्था राउतको cctv फुजेज,,अरु थाहा भएन तर कफि त्यहि छोडेर हिड्यौ, यो मन्जुर भएन ,कफि लिएर जान पाईन्छ, तर त्यही छोड्न पाईदैन,तिमि पनि घमण्डि के प्यारि आस्था, यसैगरी प्रहरीले ३३ केजी सुनको पनि फुटज देखावस्, आफू चोखिन यो फुटज बाहिर ल्याएको हो प्रहरीले , सुन काण्ड पनि देखाउने हिम्मत गर , अनि मानौला प्रहरीलाई पनि धन्यवाद जयनेपाल!
शुक्रबार दिउँसो फेसबुक लाइभमा रोएकी राउतले एयरपोर्टमा आफूमाथि महिला प्रहरीले दु’र्व्यवहार गरेको दाबी गरेकी छन्। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको सीसीटीभी फुटेजमा राउतले आफ्नो घ’मण्ड प्रहरीमाथि देखाएको देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा उनले विमानस्थलमा प्रहरी चेकिङपछि सार्वजनिक गरेको भिडियोमा उनले बोलेका शब्दको चर्को आलोचना भएपछि उनी फेरि फेसबुक लाइभा आएकी हुन्। ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि उनले प्रयोग गरेको भाषाशैलीलाई लिएर चर्को आलोचना भएको हो। आफ्नो चित्त दुःखेको भन्दै उनी लाइभमा रोएकी हुन्। उक्त भिडियोमा उनले ड्युटीमा रहेकी प्रहरीमाथि ‘डन्ठीनी’, ‘प्युसिनी’लगायत अप’शब्द प्रयोग गरेकी थिइन् ।